Kuthunjwe owesifazane befuna 'eyefa' - Ilanga News
Home Izindaba Kuthunjwe owesifazane befuna ‘eyefa’
UTHUKA izanya umndeni wowesifazane waseCotto-nlands ngaseVerulam, othunjwe yizigebengu ngoMgqibelo ebusuku zifuna imali esanda kumphumela emuva kokushonelwa nguyise wengane, maqede zadubula zabulala owesilisa wasendaweni obekulo muzi.
Kulesi sigameko kudutshulwe kwabulawa uMnu Thamsanqa Ndlovu (30). Ngokuthola
kweLANGA, uNkz Philisiwe Dlamini – okungelona igama lakhe langempela ngenhloso yokumvikela ngenxa yokushuba kwesimo – ubehleli kubo namalungu omnde-ni nabangani bakhe kosiwa
Kubikwa ukuthi kuqhamuke abesilisa abawu-5 babakhomba ngezibhamu maqede babaphoqa ukuba bangene endlini. Babize uNkz Dlamini ngegama maqede bamtshela emehlweni ukuthi
Kuthiwa uMnu Ndlovu uzame ukubaleka ngesikhathi izigebengu zisabalalise phansi, kanti zizombona, zamdubula washonela khona lapho. Ilungu lomndeni – elicele ukungadalulwa ngenxa yokwesaba – lithe konke kwenzeke ngokushesha, namanje basathukile.
“Babuze ukuthi ngubani uPhilisiwe phakathi kwethu, okuthe uma eziveza bamtshela ukuthi bafuna imali. Ngesikhathi besematasa bepequlula endlini, uThamsanqa uzame ukubaleka kanti kukhona oyedwa ombonile, wamjaha, wamdubula wabe
“Esebuyile lona obejaha
uThamsanqa, ufike wabatshela abanye ukuthi usemshaye
ikhanda. Basuke lapho baphoqa udadewethu ukuba abanikeze izinombolo zasebhange ngoba bafuna ukukhipha imali.
“Bamthathile bangena emotweni yalapha ekhaya bashaya bachitha naye. Endleleni bebelokhu bemsabisa ngokuthi bazombulala uma bengayitholi imali ngoba bayazi ukuthi unayo. Bahambe baze bayofika oThongathi, baya emshinini wasebhange bakhipha u-R2 000.
“Kusize ukuthi yisona sikalo sosuku leso, bangabe besakwazi ukukhipha enye. Babuyele
emotweni bashaya bachitha naye.
Endleleni bavimbe enye imoto eyiPolo, bayithatha bahamba sebelandelana, abanye behamba ngeyalapha ekhaya.
sesishayela amaphoyisa ucingo sawatshela ukuthi le moto ababa-leke ngayo ngeyalapha ekhaya futhi inesiqopha-mkhondo (tracker).
“Axhumane nenkampani yesiqophamkhondo ebonile ukuthi abasolwa babheke eSundumbili (eMandeni – okuyibanga elilingani-selwa ku-87.4km ukusuka eVerulam) okuyilapho onogada benka-mpani beficane khona (nezigebe-ngu),” kusho leli lungu lomndeni.
Lithe kube nokudubulana phakathi konogada nabasolwa. Lugobile uphondo kwizigilamkhuba, zacela empunzini, zashiya uNkz Dlamini emotweni.
“Isimo sinzima kakhulu, kuma-nje sicabanga nokuthutha ngoba kasiphephile neze. Okusiphatha kabi wukuthi imali abebeyifuna kayinkulu nje.
“Ngisho izingane ziyathuka ngoba zikubonile konke obekwe-nzeka, silaliswe phansi, sikhonjwe ngezibhamu,” kusho leli lungu lomndeni. Litshele ILANGA ukuthi udadewabo uze wabuyiswa ngamaphoyisa aseSundumbili izolo ngeSonto ekuseni, abachazela ngokwenzekile.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe icala lokubulala, elokubamba inkunzi, elokuduna imoto, nelokuthumba, kanti bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUnovalo umculi kamasikandi
Next articleIndondo imenze waba nokuzethemba